Inona no vaovao momba ny MIUI 8? | Androidsis
Inona no vaovao momba ny MIUI 8?
Google | | android-root, About us
Xiomi dia miverina amin'ny fikarohana ny # 01 amin'ny varotra manerantany. Araka ny efa nolazainay taminao tao amin'ny Google, ny «Apple China» dia nanangana «MaxiBebe» vaovao, ny Xiaomi MiMax. Saingy tsy tonga irery i Max, teo ambanin'ny boriborintany dia nitondra ny kinova vaovao ilay fampiasa manokana ho an'ny Xioami izay nalaza indrindra, MIUI 8.
1 Mitohy na miova ny MIUI 8?
1.1 Birao roa
1.2 Fifanarahana avana
1.3 Bokotra mitsingevana
1.4 Galerie azo ovaina
1.5 Mode fitehirizana bateria
1.6 Loharano vaovao
1.7 Rotation ny Wallpapers
1.8 Scanner vaovao
1.9 Kalkulator nohatsaraina
1.10 Fanamarihana amin'ny rantsan-tànana
Mitohy na miova ny MIUI 8?
Miaraka amin'ny kinova vaovao, sy ireo terminal vaovao, Xiaomi dia te-hamita ny fandresen-dahatra ireo tsy nanapa-kevitra ny hanaovana ny fiakaran'ny fiovan'ny vokatra an'ny Giant Chinese. MIUI 8 Tsy maneho revolisiona tanteraka momba izay efa hitantsika tamin'ny kinova faha-7, fa mifantoka amin'ny fanatsarana izany ary manampy bebe kokoa amin'izay efa natolony anay.
Io no teboka matanjaka indrindra amin'ny MIUI 8. Tsy inona izany fa ny famoronana kaody fidirana 2 tsy mitovy, izay mamily antsika amin'ny birao 2 misy fanaingoana isan-karazany, ahafahantsika manana mombamomba ny birao mifanaraka amin'ny hetsika ataontsika, ohatra: Home Desk sy Work Desk. Aza lavina fa lasa lamaody ny birao roa ho an'ny sosona Android hafa.
Miaraka amin'ity interface vaovao ity, ny fotsy no lasa fotony anehoana ireo menus samihafa izay afaka manova loko arakaraka ny volana, ny ora, ny feo, ny fifandraisana Wi-Fi, ankoatry ny mety hafa.
Ny fanampiana bokotra mitsingevana dia mahatonga ny fampiasana ny MIUI 8 mora kokoa amin'ny tanana iray amin'ny fitaovana lehibe, toy ny Mi Max. Io fiasa io dia ahafahantsika mametraka bokotra ho toy ny sakana na fitendry aminn'y toerana rehetra eo amin'ny efijery, mba hahamora ny fidirana azy ireo.
Galerie azo ovaina
Tsy misy isalasalana fa ny Gallery dia izay nahazo fanatsarana betsaka indrindra, nanomboka tamin'ny fanampiana sivana tamin'ny sarinay, hatramin'ny fanovana mivantana ireo horonan-tsary tamin'ny fomba tena nandroso.
Mode fitehirizana bateria
Ny maody fitehirizana bateria vaovao dia hahafahantsika mametraka rindran-damina anaty hibernation mba hisorohana ny fandehanan'izy ireo na ny fampiraisana azy ao ambadika, raha mbola mavitrika ilay maody. Ity fiasa ity dia ahafahantsika mitahiry ny fiainana bateria mandritra ny 2 sy 3 ora.
Na dia tsy zavatra misy fiantraikany amintsika aza izany raha tsy miteny sinoa isika, MIUI 8 dia ho tonga miaraka amina endritsoratra sinoa vaovao novokarin'i Xiaomi. Ny Lanting-ko dia mamela ny fanatsarana ny famakiana sy ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fotoam-pivoriana lehibe fampiasan'ireo fitaovana.
Rotation ny Wallpapers
Carousel Wallpapers dia hahafahantsika misafidy ambadika avo lenta marobe avy amin'ny loharano 50 mahery izay havaozina isan'andro. Izy io koa dia mamela antsika hisafidy ny fanovana mandeha ho azy ny volavola.
Angamba ny fampiasa mahomby indrindra izay ampidirin'i Xiaomi amin'ity kinova vaovao ity. Amin'ny alàlan'izany dia afaka manadihady vokatra hahitantsika ireo mitovy amin'izany isika, na afaka mividy sy mandoa mivantana amin'ny rafitra fandoavam-bola amin'ny finday, ary koa ny fanaovana matematika amin'ny fifantohana fotsiny amin'izy ireo.
Miaraka amin'ny fiovana tena hita maso amin'ny interface, ny fanatsarana dia mifantoka amin'ny fampidirana ireo fikajiana asa sarotra kokoa. Ny mpanova singa dia tafiditra ao amin'ity App ity.
Fanamarihana amin'ny rantsan-tànana
Ankehitriny isika dia afaka mamonjy ny fanamarihantsika amin'ny endrika hafa ary afaka mampiditra modely samihafa, izay azontsika zaraina. Ho fanampin'izany, azontsika atao ny manome azy fiarovana bebe kokoa amin'ny fitehirizana azy amin'ny teny miafina na amin'ny dian-tananay raha izany no izy.
Raha jerena ny fanatsarana, tsy afaka miandry an'i Xiaomi fotsiny isika hanome daty ofisialy ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » android-root » Inona no vaovao momba ny MIUI 8?
Ny fanatsarana rehetra izay hahatratra ny Google Play Store